Milan's WebLog: मुगु अनुभव- प्रवेश
बिमानबाट निस्कने बित्तिकै मन्द चलेको चिसो हिमालि बतासको झोँका सँगै म यथार्थको धरातलमा आउँछु । सुर्खेततिर झर्न लाम लागेर बसेका यात्रुहरु र सुरक्षाकर्मी प्रहरिहरुको सानो भिड जम्मा भएको छ वरपर । छेउछाउमा बिभिन्न निर्माण सामाग्रीहरु यत्रतत्र छरिएका छन शायद मुगूका बिभिन्न निर्माण योजना सम्पन्न गर्न जहाज मार्फत ल्याइएका होलान । सुरक्षाकर्मिले आगन्तुक रजिस्टरमा नाम टिप्दै गर्दा जहाज पुन: स्टार्ट हुन्छ र बिमानस्थलको धावनमार्गमा बेपत्ता धुलो उडाउँदै केही यात्रु र केही बोरा जडिबुटी बोकेर सुर्खेत तिर लाग्छ । त्यो कर्कश आवाज गर्ने यन्त्र उडेर गैसकेपछी बिमानस्थल एकदमै शान्त अनुभव हुन्छ ।
त्यो गाउँ र खस्रुको पातलो जङ्गल छिचोलेपछी प्रस्ट देखिन्छ, पुर्व तिर ओरालो पर्दै गएको डाँडा मा टक्रक्क अडिएको कारीव ४०० घरधुरी भएको सदरमुकाम गमगढी । ढुङ्गा को बिसौनिमा म एकै छिन सुस्ताउँछु । गमगढी वरपरका थेप्चा छाना भएका झुरुप्प घरहरुले बनेका गाउँहरु फुँग उडेको जस्तो देखिन्छन । बिध्यालय र सदरमुकामका घरहरुमा भने टिनको छाना टल्किरहेको देखिन्छ । तल, थोरै क्षेत्रफल भएको फाँटमा गहुँ, जौ भर्खरै उम्रिएर हरिया भएका छन । गाउँको बिचबिचमा र खेततिर पनी टिनका खम्बाहरु गाडीएका छन । मलाई गमगढिमा बिजुली छैन भन्ने थाहा छ तर चाँडै बिजुली आउने संकेत दिने ति खम्बाहरु देखेर रमाइलो लाग्छ । पर गमगढिको डाँडामा टेलिकमको भु-उपग्रहिय संकेत समात्ने सेतो छाता (डिस्क) र मोबाईल को टावर देखिन्छ । यो चाँही मेरो लागि सबैभन्दा खुशीको बिषय छ ।
लगातारको ओरालो हिँडाइले पिडौलामा मासु गाँठो परेको जस्तो भएर साह्रै गाह्रो भएको छ । गमगढी पुग्नु अघी त्यस्तै फोहर गोरेटो भएको एउटा गाउँ र सानो 'चैन खोला' पार गर्छु । त्यो पुरा ओरालो पार गर्न लगभग साँढे २ घण्टा लागेछ । गमगढी पुगेर हेर्दा भर्खरै हिंडेको बाटो देखेर आँफै अचम्म मान्छु । माओवादी द्वन्दकालमा सामन्ती सरकारका चिन्ह भनी ध्वस्त पारीएको कार्यालयको छेउमै बनाइएको कामचलाउ कार्यालय र त्यसकै आँगनको डिलमा रोपिएका र हिउँदमा पात झरेर जिङ्रिङ्ग परेका उत्तिस र बकाइनोका रुखहरुले मुगू प्रवेशमा स्वागत गरेझै लाग्छ मलाई......
Posted by Milan Dhungana at Tuesday, December 15, 2009
Eternal December 15, 2009 at 6:15 PM
hari laudari October 5, 2010 at 2:29 PM
एउटा छुटै परिचय बोकेको कर्णालीको जनजीविका र त्यहाको परिबेस झल्किने गरि लेखिएको लेख "कर्णाली" पढ्न पाउदा औधी खुसि लाग्यो..नेपालको विकास गर्नु छ भने सुरुवात यिनै एस्तै ठाउँ बाट गर्नु पर्छ भन्ने यो लेखको मर्म हो जस्तो लाग्यो! आगामी दिनहरुमा पनि अरु एस्तै थुप्रै दुर्गम गाउँ अनि कुना-कन्दराका जनजीविका अनि आफ्ना भोगाई समेटिने लेखहरुको पर्खाईमा !!!!!!!!
Shiwakoti Tara February 2, 2013 at 9:48 PM